💁‍♀️ ဂျပန်ခရီးစဉ်လေးဝယ်ယူလိုက်ရုံနဲ့ 🙋‍♀️ 💁‍♀️ဘန်ကောက် ၂ညအိပ် ခရီးစဉ်လေး Free ရယူလိုက်ရအောင်နော် 🙋‍♀️ – YANGON STYLE
💁‍♀️ ဂျပန်ခရီးစဉ်လေးဝယ်ယူလိုက်ရုံနဲ့ 🙋‍♀️ 💁‍♀️ဘန်ကောက် ၂ညအိပ် ခရီးစဉ်လေး Free ရယူလိုက်ရအောင်နော် 🙋‍♀️
🤩ပထမဦးဆုံး စာရင်းပေးသွင်းသည့် ဧည့်သည်တော် (၁၀) ဦးအတွက်သာ🤩
🌺🌺October လမှာ ထွက်ရှိမည့် 💁‍♀️ဂျပန်ခရီးစဉ်လေးကို ပထမဦးဆုံး စာရင်းပေးသွင်ဝယ်ယူသည့် ဧည့်သည်တော်များအတွက် 💁‍♀️ဘန်ကောက်တွင် ဟိုတယ်တည်းခိုခွင့် နှင့် လေဆိပ်အကြိုအပို့ ပါဝင်တဲ့💁‍♀️ Packages လေးကို 💁‍♀️Special Promotion အနေဖြင့် 💁‍♀️WCT မှ ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ဧည့်သည်တော် မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များတွက် စီစဉ်ပေးလိုက်ပါပြီရှင့်
🌺သာယာအေးချမ်းလှတဲ့ October လလေးထဲမှာ ဖူဂျီတောင်ခြေအောက်မှာ တစ်ခင်းအပြည့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ Kochia လို့ အမည်ရှိတဲ့ ပန်းရောင် (autumn Cherry Blossoms)ပန်းခင်းကြီးကို မျက်စိတစ်ဆုံး တွေ့မြင်ခံစားနိုင်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ 💁‍♀️ဘန်ကောက်မှာ ဟိုတယ် Free တည်းခိုခွင့် ရပြီး 💁‍♀️ စိတ်ကြိုက်လည်ပတ်ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်တော့မှာပါနော်
🌺ဒိီလိုအလှဆုံး အချိန်လေးတွေကို ချစ်ခရီးသည်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားစေချင်လို့ ကျွန်မတို့ World Connect Travels & Tours မှ သူများနဲ့ မတူ ထူးခြားတဲ့ ဂျပန်ခရီးစဉ်လေးကို စီစဉ်ပေးထားပါတယ်….
🌺 ပန်းရောင် Autumn Cherry Blossoms ပန်းခင်းကြီးရှိရာ
Hitachi Seaside Park မှာ မိသားစုနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တဝကြီးရိုက်မယ်
🌺 ဉာဏ်တော်အမြင့်ပေ ၁၂၀ မီတာကျော်မြင့်မားပြီး ကြာပန်းသဏ္ဍန်အောက်ခြေခံ မတ်တပ်ရပ်ရုပ်ပွားတော်ကြီး Ushiku Daibutsu
🌺ဖိုးဖိုး ၊ ဖွားဖွား ၊ ဖေဖေ ၊ မေမေ ၊ ဦးဦး ၊ ဒေါ်ဒေါ် တို့လည်း ဘုရားဖူးလို့ရအောင် ဂျပန်၏ နာမည်ကြီး ကမာကူရာ ဘုရားကိုလည်း သွားရောက် ဖူးမျှော်ဦးမှာပါ….
🌺ဖူဂျီတောင်ပေါ်တက်ပြီး အလှဆုံးသော ပုံတွေကို ရိုက်ရင်း အမှတ်တရ တွေ ဖန်တီးကြမယ်နော် 🗻🗻
🗻ဖူဂျီတောင်ခြေမှာရှိတဲ့ နတ်ရေကန်လို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ ရေတွင်းလေးတွေရှိတဲ့ Oshino Hakkai ရွာလေးကိုလည်း သွားလည်ကြမယ်
🌺သားသားမီးမီးတွေ အဆင်ပြေအောင်လည်း Tokyo Disneyland ကိုလညး် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်
♨️ဈေးဝယ်ဖို့ Ginza, Odaiba, Akihabara တို့တွေလည်း ပို့ပေးဦးမှာဆိုတော့….အားလုံးနှစ်ခြိုက်တဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အာမခံရဲပါတယ်…
💵ဈေးနှုန်းကလည်း လူကြီးတစ်ဦးလျှင် – အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၉၇၀ ပဲ ကျသင့်ပါတယ်
♨️ခရီးစဉ်ထွက်ခွာမည့် နေ့ကတော့ – အောက်တိုဘာ 10 ရက်နေ့မှ 15 ရက်နေ့ထိ
♨️ ဒီလိုစုံလင်လှတဲ့ ခရီးစဉ်လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ……
♨️World Connect Travels & Tours Co., Ltd
☎️☎️ဖုန်း ဝ၉၂၆၀၃၃၃၃၈၁၊ ဝ၉၂၆၁၂၂၂၂၃၂ ၊ဝ၉ ၅၀၅၅၈၈၈ သို ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါပြီရှင်
“ ကမ္ဘာကြီးနဲ့လက်တွေ့ချိတ်ဆက်မိစေဖို့ World Connect နဲ့ခရီးသွားစို့ ”